Kolontsaina vondrona - DAYU Irrigation Group Co., Ltd.
Wang Haoyu: Filohan'ny Dayu Irrigation Group.ary ny mpanorina sy tale jeneralin'ny hhfund.Komitin'ny Tanora Foiben'ny Antoko Demokratikan'ny Tantsaha sy Mpiasa Shinoa;Injeniera ambony amin'ny profesora;Filoha lefitry ny Federasionan'ny Tanora Jiuquan;MBA ao amin'ny Johns Hopkins University (Fanabolan'ny fotodrafitrasa);Ny mari-pahaizana licence roa momba ny toekarena sy ny fitantanana avy amin'ny Oniversiten'i Shina momba ny fambolena sy ny Oniversite Purdue;Dokotera momba ny injeniera, Sekolin'ny fiarovana ny rano, Oniversite Tsinghua (fandalinana indray);Lakeside University dingana IV;Tale lefitry ny Foibem-piaraha-miasan'ny Governemanta sy ny Renivohitra Sosialy (PPP), Ivontoerana momba ny fitantanam-bolam-panjakana ao Shina, ny Oniversiten'ny Fitantanam-bola sy ny toekarena ao Shanghai;Filoha lefitra sy sekretera jeneralin'ny sekretera stratejika ho an'ny fanavaozana ara-teknolojia amin'ny indostrian'ny fanondrahana rano.
Nandritra ny taona maro, Dayu dia nifantoka tamin'ny fanavaozana modely fandraharahana, ny fanavaozana ara-teknolojia, ary ny fivoarany sy ny fitomboany manokana, raha manatanteraka amim-pahavitrihana ny andraikiny ara-tsosialy sy manohana mafy ny asa fiahiana ny vahoaka i Dayu.Nanolotra vola mitentina 20 tapitrisa yuan mahery i Shina.Amin'ny fotoan-tsarotra indrindra amin'ny ady amin'ny valan'aretina, ny vondrona Dayu dia nahavita andiany 5 tamin'ny fanomezana 7.804.100 fitaovana isan-karazany amin'ny fisorohana ny valan'aretina mitentina 10 tapitrisa yuan ho an'ny faritany 20 ao Shina.Ho fankasitrahana ny zava-bita miavaka nataon'i Dayu tamin'ny fanomezana fitaovana miady amin'ny valan'aretina nandritra ny valan'aretina, ny Minisiteran'ny Harena an-drano dia nanome fanomezana manokana ny "Sarivongan'i Dayu" an'ny vondrona mpiaro ny rano Dayu.
Amin'ny 8thJan.2016, ny Sekretera Jeneraly Xi Jinping dia nihaona tamin'ny Filoha Wang Dong tao amin'ny Fihaonambem-pirenena momba ny Siansa sy ny Teknolojia ary nanome ny DAYU ny loka faharoa ho an'ny Fandrosoan'ny Siansa Nasionaly.
Amin'ny 22ndJan 2021, Wang Yang, Filohan'ny CPPCC，sy Hu Chunhua, Praiminisitra Lefitry ny Filankevi-panjakana, dia nanome an'i DAYU ny anaram-boninahitra hoe "Olom-pirenena mandroso amin'ny toe-karena tsy miankina miady amin'ny valan'aretina" tao amin'ny Kaonferansa Fiderana Nasionaly.
Amin'ny 26thNy Mey 2021, Wang Zhengpu, Sekreteran'ny Vondrona Mpitarika Antoko ary Talen'ny Birao Nasionaly Fanavaozana ny Ambanivohitra, dia nitsidika ny DAYU hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Tamin'ny 26 Jolay 2021, Yin Hong, Sekreteran'ny Antoko ao amin'ny Faritanin'i Gansu, dia nihaona tamin'ny Filoha Wang Haoyu ary nanome ny mari-pankasitrahana ho an'ny orinasa misongadina ho an'ny orinasa Dayu.
Amin'ny 14thJolay 2021, Zhang Jingang, governora lefitry ny faritanin'i Gansu, nitsidika an'i Dayu hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Amin'ny 26thMay 2021, ny sekreteran'i Tianjin, Atoa Li Hongzhong dia nanao dia manokana tany DAYU mba hanaovana fanadihadiana sy fikarohana.
Amin'ny 7thJan 2021, Ren Zhenhe, sekretera lefitry ny Antoko ao amin'ny Faritanin'i Gansu dia nitsidika ny DAYU hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Amin'ny 17thNov 2020, Yu Xinrong, sekretera lefitry ny MARA teo aloha, dia nitsidika ny DAYU hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Amin'ny 31stOktobra 2020, nitsidika ny tetikasa fitsitsiana rano an'i Dayu tao amin'ny Distrikan'i Wuqing, Tianjin, ny ben'ny tanànan'i Tianjin, Atoa Liao Guoxun.
Amin'ny 29thOkt, 2020, Zhang Shizhen, governora lefitry ny faritanin'i Gansu, dia nitsidika an'i Dayu hanao fisafoana sy fikarohana momba ny fiarovana ny rano.
Amin'ny 28thOkt 2020, Li Shuqi, lefitry ny ben'ny tanàna Tianjin, nitsidika an'i Dayu hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Amin'ny 17thOct, 2019, Minisitry ny MARA, Sekretera lefitry ny Antoko ao amin'ny faritanin'i Gansu Andriamatoa Tang Renjian dia nitsidika ny DAYU hanao fanadihadiana sy fikarohana.
Amin'ny 16thOct 2018, ny Filohan'ny CSRC & ICBC Mr. Yi Huiman sy ny Filoha Wang Haoyu dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika.
Amin'ny 17th,Aogositra 2018, Lin Duo, Sekretera teo aloha tao amin'ny Komitin'ny Antoko Faritany ao amin'ny Faritanin'i Gansu, dia nitsidika ny DAYU hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Tamin'ny 28 Mey 2018, E Jingping, Minisitry ny MWR teo aloha, dia nitsidika ny tetikasa fitsitsiana rano nataon'i Dayu tao Xichou, faritanin'i Yunnan mba hanaovana fanadihadiana sy fikarohana.
Amin'ny 4thJan 2016, ny Filohan'ny CPPCC Wang Yang dia nitsidika ny tetikasa pilotan'i DAYU tao Luliang mba hanaovana fanadihadiana sy fikarohana.
Amin'ny 22ndNov 2014, Li Guoying, Minisitry ny Harena an-drano, nitsidika an'i DAYU hanao fanadihadiana sy fikarohana momba ny fitsitsiana rano.
Tamin'ny 14 Mar.2012, ny Minisitry ny MWR teo aloha Atoa Chen Lei dia nihaona tamin'ny Filohantsika Atoa Wang Dong tao amin'ny Forum Eran-tany Faha-6.